Sababta iyo Cajiibyada Cawaaqib xumada ka dhalata Arimaha Xogta | Martech Zone
In kabadan kalabar dhammaan suuqleyda ayaa rumeysan taas xog wasakh ah waa caqabada ugu weyn ee hortaagan dhisida barnaamij suuqgeyn guul leh. Adiga oo aan lahayn xog tayo leh ama xog aan dhammaystirnayn, waxaad wayday awooddii aad si sax ah u bartilmaameedsan lahayd ulana xiriiri lahayd rajooyinkaaga. Taa baddalkeeda, tani waxay ka tagaysaa farqiga u dhexeeya awoodda aad u leedahay inaad hubiso inaad la kulanto baahiyaha kooxdaada iibinta sidoo kale.
Waxtarka iibka waa qayb teknoolojiyad soo kordheysa. Awoodda, oo leh xog weyn, si loo bartilmaameedsado himilooyinka, loogu beddelo hoggaamiyeyaasha, iyo in la siiyo kooxda iibka hoggaamiyeyaal aqoon leh oo salka ku haya xog weyn ayaa gelineysa dadaalkaaga soo-galidda iyo bixitaanka ee qolka qufulka, wadista xirmooyinka badan.
Laakiin 60% dhammaan suuqleyda waxay sheegaan in keydkoodu yahay aan la isku hallayn karin, 25% waxay sheegaysaa inay tahay khaldan iyo fajaciso 80% waxay dhahaan way leeyihiin khatar ah diiwaanka xiriirka telefoonka!
Xogta wasakhda ah waa dilaaga aamusan ee ololayaasha suuqgeynta. Waxay kaa dhigeysaa inaad u muuqato mid xun, waxay hoos u dhigeysaa saameynta waxyaabaha waaweyn iyo dalabyada, waxayna halis gelin kartaa sumcaddaada, sumcaddaada iyo boggaaga (ama ka sii xun). Ha iska indhatirin warbixintan iyo saamaynta ay ku yeelan karto ganacsigaaga halista aad ku jirto. Matt Heinz, Madaxweynaha Suuqgeynta Heinz
Hubso inaad raacdo Matt iyo Isdhex galka on Twitter. 10 subaxnimo PT / 1pm ET markay tahay Feb 19 waxay yeelan doonaan a Xulka wararka oo dhan mowduuca Tayada Xogta Febraayo 19keeda (Hashtags: #dirtydata iyo #MartechChat). Natiijooyinka ka soo Isku-darka Tilmaamaha Macluumaadka waxaa ka mid ah:
Xog nuqul ah (15%), qiimayaasha / safafka aan sax ahayn (10%) iyo meelaha maqan (8%) ayaa ah arrimaha tayada xogta ugu badan.
Qaabaynta aan ansax ahayn, ansaxinta e-maylka oo xumaaday iyo cinwaanka ku guuldareystay ayaa ah khaladaad aan caadi ahayn, laakiin waxaa ka dhib badan in la daweeyo; Intaa waxaa sii dheer, waxay yihiin kuwo muhiim ah marka la isku daro - oo saameynaya dabeecadaha 5 boqolkiiba SMB, 10 boqolkiiba ganacsiga iyo 7 boqolkiiba qaybta shirkadda warbaahinta.
Haddii shirkadaha warbaahinta ay falanqeyn lahayeen isticmaalka software-ka maamulka xogta, waxay u baahnaan lahaayeen inay gacanta ku qabtaan oo ay saxaan isku darka 313,890 rajada xogta.
Celcelis ahaan qiimaha hogaaminta B2B ee ka badan $ 50, e-maylkan fashilmay iyo arrimaha xaqiijinta cinwaanka ayaa loo tarjumi doonaa in ka badan $ 2.5 milyan oo ah qarash gareynta warbaahinta.
Tags: craig rosenbergtusmada xogtatayada xogtasababaha tayada xogtacawaaqibka tayada xogtasababaha xogta wasakhda ahcawaaqibta xogta wasakhda ahdhexgalaanOlolaha suuq-geyntamatin heinz
Xaaladda Qalabaynta Suuqgeynta 2015